DAAWO-Puntland oo lagaga dhawaaqay walaac ku aadan shahaadada ardayda iyo khilaafka Goodax Barre & wasaaradda waxbarashada Puntland
Daladda ururada rayidka ah ee Puntland ayaa walaac xoogan ka muujisay khilaafka dhanka shahaadada ah ee ka dhexeeya wasaaradaha waxbarashada Puntland iyo dowladda federalka ah.
Qoraal ka soo baxay daladda PUNSAA ayaa waxaa loogu baaqay madaxda Puntland iyo dowladda federalka ah inay heshiis ka gaaraan helitaanka shahaadada dugsiyada sare ee ardayda Puntland.
Dalladda ururada rayidka ah ee PUNSAA waxa ay sheegtay in ardaydu yihiin mustaqbalkii umadda Soomaaliyeed aysanna xaq u lahayn in lagu gorgortamo shahaadadoo isla markaana la siyaasadeeyo.
Sii-hayaha wasiirka waxbarashada dowladda federalka ah ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre, wuxuu sheegay inuusan shahaado u hayn ardayda Puntland haddii uu siinaya ay noqon doonto warqad guduudan.
Hirdanka u dhexeeya Puntland iyo federaalka ee shahaadadu wuxu salka Ku hayaa hunguri iyo kala riixasho dakhliga ardayga laga qaado ee shahaadada loogu sameeyo oo u dhexeysa $30-50.
Puntland waxay rabtaa inay sii xejisato oo waraaqda ay samayso ee shahaadada ugu yeertay sii socoto,gacantana loosoo geliyo deeqaha waxbarasho inta Puntland hesho si ay u musuqaan,ugana iibiyaan cidii dhaqaale bixisa,halka Federaalkuna rabo inay kala wareegaan,lacagtaana helaan,saamiga ardada Puntland ka hesho deeqaha waxbarashona u helaan arday isla Puntland ah oo ay ka iibiyaan,kana helaan dakhli.
Waxa meeshaas mar walba Ku khasaaraya ardayga aan helin markii horeba waxbarasho tayo leh,hadana shahaado la aqoonsanyahay waayi.
Waxbarasho tayo leh,anfici kartana mustaqbalka ardayga ma jirto Somaliya oo idil,waxayna noqotay qayb kamid ah ganacsiyada lava ganacsado,lacagna laga sameeyo sida ay noqotay wax kasta oo dalka ka jiraayi oo caafimaadku Ku jiro,lana hayn dhakhaatiir aqoon u leh qaliimada,daawada iyo adeegyada ay bixiyaan,umadiina Ku dabar jaray daawo dhacday amaba khaldan.
Waa lugooyo dhalinyartii dalka waxbarashadan bilaa tayada ahi.
Dadbaa shahaado federal moodi wax manfac leh!!!
Waa waraaq lacag lagu goosto,waxana hela qof aan maalin dugsi tegin si uu shaqo ugu doonto,loona fududeeyaa,caalamkana qiimaynba kama laha,lamana aqbalo run ahaanteeda.